Vikela ukuqasha kwakho kwepulazi le-hemp ngesivumelwano esibhaliwe
I-Hemp Farm Ukuqasha noma Ukuhlanganyela Kwezitshalo
Ngingakwazi ukuqasha ipulazi lami le-hemp?
Uma umlimi enelayisense yokutshala i-hemp, ungaqasha ipulazi lakho. Umlimi ojwayelekile akayena umnikazi wawo wonke umhlaba awulima. Futhi, e-Illinois, isicelo selayisense yepulazi le-hemp sivumela umfakisicelo ukuthi akhombise ukuthi uyaqasha epulazini ahlose ukukhulisa kulo i-hemp.
Kungani Kufanele Ube nokuqashiswa NgePulazi Lakho Le-Hemp?
Amapulazi amaningi awanaso isivumelwano sokuqashisa esibhaliwe, noma isivumelwano esibhaliwe sinamashumi eminyaka sikhona. E-Illinois abantu bangaba nokuqashisa ngomlomo epulazini, kepha i-hemp ayifani nobhontshisi noma i-soy - hemp idinga ilayisense evela kuhulumeni futhi inemikhawulo yokuthi ngubani ongayikhulisa noma ayicubungule. Ngakho-ke kuwumqondo omuhle ukuvikela ipulazi lakho ngesivumelwano esibhalwe phansi.
Sizoxoxa ngezinhlobo ezijwayelekile zokukhokhwa kokuqashiswa kwamapulazi futhi sinikeze izinzuzo ezintathu eziphezulu zokuqashisa okubhaliwe kwebhizinisi lakho lokulima i-hemp. Bheka a ummeli we-hemp mayelana nebhizinisi lakho ukuqinisekisa ukuvikelwa kwalo ezingcupheni ezingaziwa.
Imali Yokuqashisa noma Imali Yokwabelana Yezinkokhelo Zokuqashiswa Kwepulazi.
Ukuqashiswa kwepulazi kuwela emaqenjini amabili aphambili: Imali Yokuqashisa, noma Yabelana Ngezitshalo. E-Illinois, lapho u-2019 ezoba unyaka wokuqala we-hemp olinywayo, noma yiluphi uhlobo lokuqashisa luvame kakhulu. Ukuqashiswa kwepulazi kunamathuba amaningi okufuna ukuqashwa kwemali njengoba kwenzelwa ukwabelana ngezitshalo, kepha i-hemp ingaziboleka ngokwengeziwe kusabelo sezitshalo ngezizathu ezixoxwe ngezansi.
Izinzuzo ezi-XNUMX eziphezulu Zokuqashiswa Kwepulazi Obhaliwe
uhlale uhambisana nemikhuba emihle kakhulu yezimboni
chaza ngokucacile imigomo yesivumelwano nokuvikela kumlimi nakubanini bomhlaba
setha imigomo yokukhokha njenge- “rent rent” noma “share share”
Isivumelwano Sokuqasha Imali
Ukuqashiswa kwepulazi lemali kulula kakhulu, imali yokuqasha. Umlimi we-hemp ubeka inani ledola ukuthi uzokhokha malini ngehektare ngalinye. Imvamisa kuphela izinkokhelo ezimbili kuphela zerenti eziza ngonyaka wesivuno, eyodwa cishe ngoMashi 1, kanti enye ngo-Okthoba 1, noma lapho kufika isivuno ukuguqula isitshalo sibe yimali engenayo.
Isitshalo sivame ukuthengiswa ngabathengisi bezinhlamvu unyaka wonke - kepha njengoba u-2019 kungunyaka wokuqala wezitshalo - ukumaketha okusanhlamvu nezinkontileka zesikhathi esizayo azikwazi ukusetshenziswa ukuthengisa isivuno ngokukhululeka njengezinye izimpahla.
I-Cash Rent epulazini liqashisa ukuhweba okubandakanya inzuzo ekuthengisweni kwesitshalo ngokubikezela kwamanani athile werenti azobakhona.
Ukuqashiswa kwepulazi akudingeki kubhalwe phansi - kepha ukuqedwa kwepulazi okungenani.
Izivumelwano Zokwabelana Ngezitshalo
Lapho umlimi nomnini-mhlaba bevuma ukusebenzisana ukukhulisa nokuvuna isivuno, lapho-ke isabelo sezitshalo siyabalwa Isabelo sezilimo singabizwa nangokuthi ukulima kwabaqashi. Umnikazi womhlaba unikela nge-acerage yakhe, umlimi unika abasebenzi kanye nemishini, futhi bobabili bahlanganyela inzuzo noma ekulahlekelweni.
Ukuqhuma kwemakethe yeCannabidiol (CBD) kucindezela imisebenzi eminingi yokulima i-hemp yezimboni. Abalimi abaningi abangena kulo mkhakha bafuna ukutshala i-hemp njengesitshalo semali esingcono kunalokho okungenzeka njengamanje. Iqembu leBrightfield ukholelwa ukuthi i-CBD izoba imboni yama- dollar ayizigidi ezingama- $ 22 eminyakeni embalwa nje.
Ngenxa yezomnotho emakethe, kanye nesasasa embonini, izivumelwano zokwabelana ngezitshalo zinganikeza abalimi be-hemp indlela yokwabelana ngenzuzo nabaninimzi. Imibandela yenkontileka yokwaba izindleko nenzuzo ingahle ibhalwe nganoma iyiphi indlela umlimi nomninikhaya abayifunayo.
Yikuphi Ukuqasha Kwepulazi Okuhamba phambili kuPulazi lakho leHemp?
Lokho kuya ngokuthi ufunani ekuqashisweni. Ngabe ufuna izinkokhelo ezingabikezelwa nokuthi umnikazi womhlaba angahlali ebhizinisini lokulima? Ngemuva kwalokho, cabanga ngenketho yokuqashwa kwemali. Kepha qaphela ukuqhuma kwe-CBD futhi intengo ye-CBD ecebile yehle ukuze yehle. Ukwehla kwamanani kungenza lezo zinkokhelo eziphakeme zokuqasha zibe buhlungu kubalimi be-hemp yokuqalisa.
Ngabe umnikazi womhlaba unamaphupho akhe okuzuza imali evela emakethe ye-CBD yemakethe, futhi abe nobudlelwano obuhle bokusebenza nomlimi we-hemp? Ngemuva kwalokho isivumelwano sokwabelana ngezitshalo senza ukuthi bobabili abathintekayo bahlukanise izindleko nezinzuzo embonini entsha ye-hemp.
Akukho mpendulo eyodwa eyiqiniso, kepha kunesizathu esisodwa esikhulu sokuthi ukuqasha kwakho ipulazi le-hemp kufanele kube ngokubhala.
IHemp entsha futhi ilawulwa kakhulu
I-hemp ingakhuliswa kuphela uma umlimi enelayisense enikeza igunya lokuthi ayikhulise. Umlimi we-hemp akakwazi ukucubungula i-hemp ngaphandle kokuthi futhi abhaliswe njenge-processor ye-hemp. Umbuso uzohlola i-hemp bese ubona ukuthi imisebenzi ihlelekile.
Akugcini nje ngokuqashiswa kwepulazi okubhaliwe okunikeza imigomo ngqo yesivumelwano labo bobabili abanayo, futhi kukhombisa ukuthi ipulazi lakho le-hemp lihambisana nemikhuba emihle embonini. Ukuba nezinqubomgomo nezinqubo ezilungiselelwe ipulazi lakho le-hemp kuzolisiza ukuthi lihlale lihambisana nokuma okuhle nombuso unikeza ipulazi lakho le-hemp ilayisense.
Sikufisela inhlanhla yokukhulisa isivuno sakho esisha. Futhi shayela uma ungathanda ukukhuluma nabameli bethu ngomsebenzi wakho we-hemp.